Bu'aan qorannoo haaraa sirna dhibee ittisuu qaamaarratti argame 'kaansarii hunda yaaluu danadeessisa' - BBC News Afaan Oromoo
Bu'aan qorannoo haaraa sirna dhibee ittisuu qaamaarratti argame 'kaansarii hunda yaaluu danadeessisa'
Goodayyaa suuraa Seelii kaansarii harmaa
Bu'aan qorannoo haaraa sirna dhibee ittisuu qaamaa namaa (immune) irratti argame fayyadamuun dhukkuboota kaansarii hunda yaaluun ni danda'ama jedhu saayintistoonni.
Gareen qorattootaa yunivarsiitii Kaardif mala kaansarii xannacha naannoo qaama walhormaataa dhiiraa(piroosteetii), harmaa, sombaa irratti argamaniifi kaansarii biroo laaboraatoorii keessatti ajjeessuun danda'amu argataniiru.
Argannoon kun dhukkubstattootarratti kan hin yaalamne ta'uullee kan "carraa bal'aa" qabudha jedhu.
Ogeessonni qorannoo kana gaggeessaa jiran akka jedhanitti, ammallee sadarkaa jalqabbiirra kan jiru ta'ullee, hojii baayyee gammachiisaadha.
Sirni ittisa dhibee qaama keenyaa (immune) karaa uumamaan kan dhukkuba ofirraa ittisu ta'us garuu seelota kaansariis dhiibbaa ni geessisa.
Saayintistoonni kunneen "mala baramaa hin taaneenee"fi karaa duraan bira hin ga'amiin sirna dhibee ittisuu qaamni namaa uumamaan dhibee kana ofirraa lolu ilaalan.
Qorattoonni dhiiga namaa keessatti seelii-T arganiiru. Kunis seelii dhibee ittisu yoo ta'u, qaama keenyarra rakkoon/dhibeen qaqqabaa jira taanaan sakatta'ee akka balleeffamu/maqfamu taasisa.
Garaagarummaansaa inni kun kaansarii heddurratti dhiibbaa geesisuu danda'a.
"Dhukkubsataa hunda yaaluuf carraan ni jira," jechuun Pirof. Andiriiw Seeweel BBC'tti himaniiru.
Dabalataanis akkas jedhu: "Durarratti namuu wanti kun ni danda'ama jedhee hin yaadne."
Dhukkubsattuun baqaqsanii wallaanuurratti ibdiddaan gubattee duute
Mala haaraa qorannoo dhiigaan kaansarii argu
"Kunis ilaalcha yaala kaansarii 'hangi-tokko-hundaaf akka ta'utti' jedhu qabaata. Inni kunis gosa seelii-T kaansarii hunda balleessuu danda'a."
Seeloonni-T gubbaasaaniirratti "simattoota" sadarkaa keemikaalaarratti "arguuf" isaan gargaaran qabu.
Gareen yunivarsiitii Kaardif seelii-T fi simataasaa/fudhataasaa kan seelota kaansarii hedduu kutaa yaalii keessatti ajjeesuu danda'u argataniiru.
Gosoonni kaansariis kan akka sombaa, gogaa, dhiigaa, harmaa, kalee, gadaamessaafi ovaariiti.
Haala gariidhaan tishuulee hin tuqu.
Haala akkamiin akka hojjatu ammas qorataa jiru.
Simataan seelii-T molokiyuulii MR1 jedhamu waliin walitti dhufu.
"Nutis seelota kaansarii keessatti molokiyuulii MR1 keessatti seelii-T ibsuun namoota jalqabaati. Kanaan dura inni kun hin hojjatamne," jechuun qorataan Gaarii Dooltan BBC'tti himaniiru.
Teeraappiin kaansarii seelii-T duruma kan jiru yoo ta'u, guddinni teeraappii humna ittisa dhibee qaama namaa baay'ee barbaachisaa kan ta'edha.
Fakkeenyi gaariin CAR-T- qoricha injineeringii sanyiitiin hojjatamee seelii-T dhukkubsattootaa keessatti kaansarii balleessuudha.
CAR-T dhukkubsattoota haalaan dhukkubsatan haalaan akka foyyaa'an taasisuun jijjiirama guddaa fida.
Haata'u malee, akkaataan ittiin yaalamu kallattiidhaaniifi kaansarii muraasa keessatti qofa hojjata.
Qorattoonni akka jedhanitti simataan seelii-T yaala kaansarii "idil-addunyaawaa" ta'uu danda'a jedhu.
Haala qabatamaan akkamitti hojjata?
Dhukkubsataa kaansarii keessaa dhiigni ni fudhatama.
Seelonni erga kutaa yaalii keessatti guddatanii booda qaama dhukkubsattootaa keessatti deebifamu. Kunis mala teeraappii CAR-T hojjachuuf qophaa'een wal fakkaata.
Ta'us garuu qorannichi bineensota keessatti qofa kan yaalame yoo ta'u, namaaf kennamuusaatiin dura garuu qorannoon hedduu taasifamuun irra jiraata.
Qorattoonni maal jedhu?
Luuciyaa Mooriifi Geenaaroo Dee Libeeroo yunivarsiitii Baael kan Siwiizaelaand irraa akka jedhanitti qorannichi, "bu'a qabeessadha" ta'us garuu ammarratti kaansarii hunda keessatti hojjachuu danda'a jechuun hin danda'amu jedhan.
Yunivarsiitii Maanchister keessatti Piroofeesar Imiinooloojii kan ta'an Daani'eel Deevis akkas jedhan: "Ammaf wanti kun qorannoodha, akkasumas qorichoota dhukkubsattootaaf kennamu waliin walitti hin dhihaatu.
"Argannoon akkanaa argamunsaa beekumsa keenya waa'ee sirna ittisaarratti jiru cimsuufi carraa qorichoota fuulduraa beekuuf waan gaarii ta'uu danda'a."
Dhukkubsattuun kaansarii baqaqsanii wallaanuurratti ibiddaa gubattee duute
31 Muddee 2019